I-Cottage Enhle - I-Airbnb
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Dave And Laarni
U-Dave And Laarni Ungumbungazi ovelele
Ikotishi elihle, amamayela ayi-1.5 ukusuka emfuleni i-Kenai kanye namamayela angu-2 ukusuka e-Centenial park, imayela elilodwa ukusuka esitolo segrosa,. Ifakwe ngokugcwele, isiqandisi nesiqandisi, i-Wifi, i-TV, Igumbi lokulala lingaphezulu futhi lichazwa njengendawo ehlala kamnandi. Izitebhisi zinokhaphethi futhi ziwumqansa (azifanele noma yimuphi umuntu ongase abe nezinkinga ngezitebhisi ezikhuphuka kancane kunalokho ezivamile).Igumbi lokugeza liphansi, isistimu yomsindo wezinyo eliluhlaza okwesibhakabhaka. Umnikazi ocingweni nganoma yiziphi izidingo. Sihlala efulethini elihlukile emagcekeni.
Imibalabala futhi ihlanzekile echazwe ukulinganisa njengeyinhle. Igumbi lokulala liphezulu futhi lingachazwa njengendawo ehlala kahle. Nendlu yokugezela iphansi.
Ukuhamba kwabantu okuthile ( 8-9 am..5-6 pm)Imvamisa ukuthula nokuthula ngemva kuka-8pm, omakhelwane bahlukaniswa ngocingo nemigqa yezihlahla. Isitolo segrosa esinemayela elingu-1 sivala ngo-9 ebusuku phakathi nezinyanga zasehlobo. Isitolo segrosa saseSafeway sivula kuze kube phakathi kwamabili ngamamayela angu-2.5, uFred Meyers ngamamayela angu-3.5 (indawo enhle yokuthenga). Ukudoba okuhle kakhulu okufinyeleleka kalula komfula i-Kenai ephansi (i-centineal park, abazingeli abangekho emthethweni basohlangothini oluseningizimu).
Ibungazwe ngu-Dave And Laarni
Sithumelele umlayezo noma ushayele (PHONE NUMBER HIDDEN) nganoma yiziphi izidingo. Noma ukubhala ngocingo (IFONI INOMBOLO EFIHLILE)..Sizokuhlola mathupha futhi sikubonise. Sizokunikeza ucingo lokuvuka noma ungqongqoze uma ufisa. Vele usitshele isikhathi. Wamukelekile ukuthi ungene sekwephuzile uma kudingeka, kodwa sifisa ukuhlangana nawe. Uma uthanda sizobeka ngisho nokudla kwasekuseni. Ikhofi lizophuma ngokuchofoza nje kuphela....Vele ulivule- (i-ground columbian). Itiye elikhilimu nesidlo sasekuseni kanye nekhofi nakho kuhlinzekiwe. Okunye okuyisisekelo kokupheka izinhlanzi, ukudla kommbila, ingxube ye-pancake, ufulawa namafutha okupheka kanye nezinye izidingo zokupheka eziyisisekelo ezinikeziwe. Futhi uma uphuma ngicela ushiye umnyango ungakhiyiwe futhi ushiye izikhiye ngaphakathi kwendlu.. Ngiyabonga..
Sithumelele umlayezo noma ushayele (PHONE NUMBER HIDDEN) nganoma yiziphi izidingo. Noma ukubhala ngocingo (IFONI INOMBOLO EFIHLILE)..Sizokuhlola mathupha futhi sikubonise. Sizokuni…
UDave And Laarni Ungumbungazi ovelele